Maxay yihiin ilaha qadka tooska ah ee Backlinko?
Backlinks waxay sii wadi doontaa in ay maamusho dunida digital, inkastoo qaar ka mid ah articles iyo sidoo kale webmasters noo sheegaan waxyaabo kale oo ku saabsan. Dhab ahaan, daraasadaha ugu dambeeyey raadinta mashiinka raadinta ayaa muujinaya in backlinks ay yihiin mid ka mid ah qodobada ugu muhiimsan ee Google iyo mashiinnada kale ee raadinta.
Marka ay timaado isku xirka dhismaha, waxaa jira habab badan oo la isku dayey iyo kuwo run ah oo la heli karo. Qaar ka mid ah waxay raacaan tilmaamaha Google, halka kuwo kale ay ku xad gudbaan. Maalmooyinkay, qaar ka mid ah farsamooyinka farsamooyinka abuuraya waxay noqdaan kuwo waxtar leh wakhtigayaga (f. e. boostada martida ama faallooyinka dib u celinta). Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira wali wax badan oo aan la aqoon ama siyaabooyin dhulka hoostiisa ah sida loo helo dib-u-sifeyn bilaash ah.
Qodobkani waxa aan doonayaa in aan kula wadaagno farsamooyinka dhismaha ee dhulka hoostiisa, qaar ka mid ah ayaan ka soo qaatay Brian Dean Backlinko milkiilaha. Aan u fiirsano mid kasta oo iyaga ka mid ah.
Siyaabaha loo helo dib uqorasho sababtoo ah habka Backlinko
Farsamada dhismaha xiriirka bulshada
si aad u hesho xiriirada dibadda ee warbaahinta bulshada. Sida waafaqsan habkan, waa inaad la wadaagtaa waxyaabaha ku habboon oo soo saari doona waxyaabaha la siiyay si aad u wadaag ah. Ka dib markaa, waxaad ubaahan tahay inaad gaarto dadka isticmaala kuwaas oo marka hore la wadaagay mawduucan oo ay ku siiyaan sheey cusub ama cusub.
Farsamaynta dhisida Skyscraper
Farsamaynta dhisidda Skyscraper waxaa sameeyay Brian Dean. Waxay ka caawisay inuu kordhiyo taraafikada organic-ga ah in ka badan 400%. Marka loo eego habkan, waxaad u baahan tahay inaad gartid shuruudaha raadinta ee hooseeya oo aad ka heli karto gabal wax ku ool ah kaas oo caan ka ah dadka isticmaala. Taas ka dib, waa inaad si fiican u qortaa shuruudaha raadinta isku mid ah. Hubi, qaybtaada cusub ee mawduuca waa mid gaar ah iyo cilmi-baaris ku saleysan. Si aad u dhamaystirtid habka dhismaha ee isku xirnaanta, waxaad u baahan tahay inaad kobciso buuggan cusub ee warbaahinta bulshada oo ah hadafka qaar ka mid ah mawduucyada PR ee ugu dambeeya oo lagugu soo celinayo.
Tijaabooyinka xiriirinta farsamada dhismaha
Tijaabadu waxay aad u faa'iido u leeyihiin ganacsiyada maxaa yeelay waxay muujiyaan macaamiisha ku qanacsanaanta badeecadaha ama adeegyada shirkadu bixiso. Webmasters waxay iyaga raadinayaan iyaga oo og inay faa'iidooyinka ay u keeni karaan dukaamada internetka. Sidan oo kale, abuuritaanka marqaatigaaga ayaa siinaya fursado aad u fiican si aad u kasbato naftaada si fudud oo xiriir ah oo xiriir ah. Isticmaalayaasha si fiican u soo jiitay shirkado leh markhaati-ururin madani ah macaamiisha dhabta ah marka loo eego boggaga internetka oo soo bandhigaya faallooyinka (sida sharcigu si sahlan loo ogaan karo). Taageerada kale ee dhabta ah ee boggagaaga ayaa helay, kan sare wuxuu ku darayaa bogga natiijooyinka raadinta. Waxaa intaa dheer, waxay u muuqataa inay ku kalsoon tahay ganacsiyada kale. Taasi waa sababta ay kuugu xidhi doonaan goobtaada iyagoon weydiisan. Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad samayso waa inaad dooratid alaab aad jeceshahay inteeda badan oo aad la xiriirto bixiyeheeda si aad u bixiso markhaatigaaga tan alaab gaar ah. Inta badan goobaha dukaamada tafaariiqda badani waxay leeyihiin bogga markhaatiga gaar ah ujeedadaas. Taasi waa sababta ay kuu fududaan doonto inaad si toos ah ugu gudbiso adreeskaaga boggooda.
Farsamada dhismaha ee xiriirinta ayaa sidoo kale soo bandhigay shirkadda Backlinko blog Brian Dean Source .